သမ္မတနှင့်တပ်မတော် | dawnmanhon
အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ ကမ္ဘာကျော်သတင်းစာကြီးတစောင် က ၀တ္တုတိုပြိုင်ပွဲ တခုကျင်းပသည်။ ထိုဝတ္တုတိုပြိုင်ပွဲ၏စည်းကမ်းချက်များမှာ ထူးဆန်းလှ၏။ ထိုစည်းကမ်းများမှာ
(၁) ၀တ္တုတွင်စာကြောင်းသုံးကြောင်းပဲပါရမည် ။
(၂) ဘာသာရေးအငွေ့ အသက်ပါရမည် ။
(၃) ၀တ္တုတွင်မိသားစုနှောင်ကြိုးပါရမည် ။
(၄) လျှို့ ဝှက်ဆန်းကြယ်ဖြစ်ရမည် ဟူသတည်း။
ထိုကိစ္စများကိုစာကြောင်းသုံးကြောင်း တည်းဖြင့် မည်သို့မျှဝတ္တုရေးဖွဲ့လို့မရပါ ။သို့သော်စာရေးဆရာတယောက်က မရရအောင်ရေးဖွဲ့ခဲ့၏ ။ သူရေးခဲ့သောဝတ္တုစာသားသုံးကြောင်းမှာ
ဘယ်သူနဲ့လဲဆိုတာတော့ သမီးလည်း စဉ်းစားလို့မရသေးဘူး “
ဟူ၍ဖြစ်သည် ။ ဘာသာရေး၊မိသားစု၊ လျှိုးဝှက်သည်းဖို အားလုံးပါဝင်သောကြောင့်ထိုဝတ္တုဆုရ၏။စာသားမှာတိုပင်တိုသော်လည်း စဉ်းစားစရာ များစွာပါဝင်နေသည် ။
ထိုအဖြစ်အပျက်နှင့်ခပ်ဆင်ဆင်ပင် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ၌ တိုတောင်းသော်လည်းရသမျိုးစုံပါဝင်သော စကားတခွန်းပေါ်ပေါက်ခဲ့၏ ။ ထိုစကားမှာ
“ တပ်မတော်အနေဖြင့် သမ္မတ၏ခေါင်းဆောင်မှုအောက်တွင် သာလုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပြီး မိမိတို့တပ်မတော်သည် မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရ၏ ဦးဆောင်မှုအောက်တွင် သာရှိသည် “ ဟူ၍ဖြစ်သည် ။ ကောလဟလစကားမဟုတ် ၊ အပြင်လူကပြောခြင်းမဟုတ် ၊ ပေါက်ကရလေးဆယ်စကားမဟုတ် ၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ကိုယ်တိုင် ပြောကြားခဲ့သောစကားဖြစ်သည် ။ မြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာသော ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဝင် ၁၅ နိုင်ငံမှ သံအမတ်ကြီးများ နှင့်တွေ့ ဆုံရာတွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ကဤသို့ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Facebook စာမျက်နှာတွင် ၂၀၁၈ မေလ ၄ ရက် ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည် ။ ထိုစာပိုဒ်ကလေးကိုဖတ်ရသည်မှာ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သော ဆုရ၀တ္တုတိုကလေးလိုပင် ရသစုံလျက် စဉ်းစားတွေးတောစရာများ စွာကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည် ။
ပြည်သူလူထုသည် မယုံနိုင်အောင်ဖြစ်ရသော အဗ္ဘုတရသကိုလည်းခံစားရ၏ ။ စိတ်ဓာတ်တက်ကြွစေသော ၀ီရရသကိုလည်း ခံစားရ၏ ။ ဝေဖန်မှုများအတွက် ထောင်၊လက်ထိပ် စသည်တို့ကို လည်းမြင်ယောင် လာသည်ဖြစ်ရာ ဘယာနကရသ ကိုလည်းခံစားရပါ၏။ ဖတ်သူအပေါ်မူတည်၍ ၀ိဘစ္ဆရသ ၊ ဟာသရသ စသည်ဖြင့် တဦးနှင့်တဦး ကွဲပြားကြပါလိမ့်မည်။
ပြည်သူတွေသည် ယခင်က မြန်မာနိုင်ငံတွင် အစိုးရကသပ်သပ် ၊တပ်မတော်ကသပ်သပ် ဟုကျွန်တော်တို့ ဥာဏ်တထွာတမိုက်ဖြင့်ယူဆထားခဲ့ဖူး၏ ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အစိုးရဆေးတက္ကသိုလ်ရှိလျက်နှင့် တပ်မတော်ဆေးတက္ကသိုလ်ဟူ၍ဖွင့်၏၊ အစိုးရနည်းပညာတက္ကသိုလ်များရှိပါလျက်တပ်မတော်နည်းပညာတက္ကသိုလ်ပေါ်လာ၏ ။ အစိုးရပိုင် MRTV ရုပ်သံလိုင်းရှိပါလျက် မြ၀တီရုပ်သံလိုင်းဟုထူထောင်၏ ။ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ရှိသော်လည်း အင်းဝဘဏ်ဟုပေါ်လာပြန်သည် ။ ထို့ကြောင့်အရာရာ နှစ်ခုနှစ်ခုရှိနေသဖြင့် သပ်သပ်စီဟုထင်ကြခြင်းဖြစ်သည် ။ ထို့အပြင် တပ်မတော်သားများသည်နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်ဘူးဆိုသော စကားများကိုလည်းကြားဖူး၏။ နိုင်ငံဝန်ထမ်းစာရင်းထဲသို့တပ်မတော်သားများကို ထည့်၍မရဘူး ဆိုသဖြင့်တပ်မတော်သားများမှာ သီးသန့်အဖွဲ့အစည်းသဖွယ်ဖြစ်လေသည် ။ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများမှာ အသက် ၆၀ ကျော်လျှင် အငြိမ်းစားယူရစမြဲဖြစ်ရာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေသည် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရာထူးကို အသက် (၇၈)နှစ်အထိသော်လည်းကောင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်ေးအာင်လှိုင်သည်ယခု လာမည့် ဇူလိူင်လ ၃ ရက်နေ့တွင် အသက် (၆၂)နှစ် ပြည့်မည်ဖြစ်ပြီး ၆၃ နှစ်ထဲသို့ ၀င်တော့မည် အထိလည်းကောင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ဆဲဖြစ်ရာ တပ်မတော်သားများသည် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများမဟုတ်ဘူး ဆိုသောစကားမှာ ဟုတ်တုတ်တုတ် ရှိသည်ဟုထင်မြင်မိပါသည် ။ သို့ပါသော်လည်း နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်က နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများကို လစာတိုးသောအခါ တပ်မတော်သားများလည်း ထိုတိုးမြှင့်ခံစားခွင့်ကိုရခဲ့ကြပြန်သည်။ ဒါဆိုရင်သူတို့ဟာဝန်ထမ်းတွေပဲပေါ့ ဟုထင်မြင် မိပါသည် ။ နိုင်ငံဝန်ထမ်းဟုတ်မဟုတ် ဆိုသောကိစ္စမှာပင် အတော်ရှုပ်ထွေးနေပါသည် ။ တကယ်ဆိုလျှင် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတခုလုံးတွင် နိုင်ငံတော်အခြေခံမူများအခန်းတွင်လည်းကောင်း၊ တပ်မတော်ဟူသော အခန်းတွင်လည်းကောင်း တပ်မတော်သားများသည် နိုင်ငံဝန်ထမ်းများမဟုတ်ပါ ဟူသော ပြဌာန်းချက် မပါရှိချေ ။ထို့ကြောင့်တပ်မတော်သားများသည်နိုင်ငံဝန်ထမ်းများမဟုတ်ဟုပြောလာခဲ့လျှင်အတော်နားလည်ရခက်သောကိစ္စဖြစ်ပေလိမ့်မည် ။
ထို့အပြင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၂၀(ခ)တွင် တပ်မတော်သည်တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စအားလုံးကို လွတ်လပ်စွာစီမံခန့်ခွဲ စီရင်ဆောင်ရွက် ပိုင်ခွင့်ရှိသည် ဟုပြဌာန်းထား၏ ။ ပုဒ်မ၂၀(ဂ)တွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးးစီးချုပ်သည် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အားလုံး ၏အကြီးအကဲဖြစ်သည် ဟုလည်းပါရှိပါသည် ။ ထို့အပြင် ပုဒ်မ ၃၄၃(ခ) ၌ စစ်ဘက်တရားစီရင် ရာတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၏အဆုံးအဖြတ်သည် အပြီးအပြတ်ဖြစ်သည် ဟုပါရှိပြန်သည် ။ထို၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ တွင် တပ်မတော်နှင့်ပါတ်သက်သောပြဌာန်းချက်များ၌ နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏အခန်းကဏ္ဍကိုလုံးဝဖော်ပြထားခြင်း မရှိချေ ။ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သည် တပ်မတော်၊ရဲတပ်ဖွဲ့ စသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အားလုံး၏ အကြီးအကဲ ၊ တပ်မတော်အုပ်ချုပ်ရေး ၊ တရားစီရင်ရေး ၊ စစ်ဥပဒေများပြဌာန်းရာတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကိုသာအဓိကဇာတ်ကောင်ပြုထားပါသည် ။ ထို့ကြောင့် ပြည်သူလူထု၏တရားစီရင်ရေးနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးတွင် တပ်မတော်သည် သီးသန့်ဥပဒေများနှင့်သာကျင့်သုံးနေပြီး နိုင်ငံတော်သမ္မတက ဥပဒေအရ ပါဝင်နိုင်သောအခွင့်အာဏာမှာ မရှိသလောက်ဖြစ်ပါသည် ။ ထို့ကြောင့် ပြည်သူလူထုက မြန်မာနိုင်ငံတွင်တပ်ကသပ်သပ် အစိုးရကသပ်သပ်ဟုထင်ယောင်ဝိုးဝါးဖြစ်ကြခြင်းဖြစ်သည် ။ ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတရပ်လုံးတွင် တပ်မတော်နှင့် သမ္မတကိုပူးတွဲ ရေးထားသော ပြဌာန်းချက်ပုဒ်မ တခုသာရှိပါသည် ။ ထိုပုဒ်မမှာ ပုဒ်မ ၃၄၂ ပါ နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးကောင်စီ၏အဆိုပြုထောက်ခံချက်ဖြင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကိုခန့်အပ်တာဝန်ပေးရမည် ဟူသောပြဌာန်းချက်ဖြစ်သည် ။ ထိုအချက်သည်ပင်လျှင် မရှုပ်မရှင်းဖြစ်နေပါသည် ။
ထိုပုဒ်မ ၃၄၂ ကို ဆက်ဖတ်ကြည်.သောအခါ တိုင်းပြည်ကာကွယ်ရေးနှင်. လွှတ်တော်နိုင်ငံရေးအတွက်အရေးအကြီဆုံးဖြစ်သည်. တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီချုပ်ဖြစ်သင်.ဖြစ်ထိုက်သည်. အရည်အချင်းသတ်ချက် ကိုလုံးဝမတွေ.ရှိရသည်မှာအလွန်ထူးဆန်း၍ ဖွဲ.စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၏လစ်ဟာမှုကြီး (သို.မဟုတ် )တမင်သက်သက် အသာစီးယူထားသောအချက်ကြီးဖြစ်နေပါသည် ။ နိုင်ငံအတွက်အရေးအပါဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သော သမ္မတရာထူးရွေးချယ်ရာတွင် ပုဒ်မ ၅၉ (က) မှ (ဆ) အထိ အချက် ခုနစ်ချက် အသေးစိတ်ရေပက်မ၀င်အောင်ပြဌာန်းထားသော်လည်း တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဖြစ်ထိုက်သည်. လူတစ်ယောက်၏ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်များကို စာရွက်ပေါ်တွင်တိတိကျကျဘာမှချရေးထားခြင်းမရှိပဲ ကာလုံ အဖွဲ.ကိုသာလွှဲချထားလေသည် ။ထိုကာကွယ်ရေးနှင်.လုံခြုံရေးအဖွဲ.တွင်အဖွဲ.၀င် (၁၁)ဦးရှိရာတွင်လည်း စစ်ဘက်မှလက်ရှိ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၊ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ၊တပ်မတော်မှတင်သော ဒုသမ္မတစ်ယောက် ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ၊ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဟူသော တပ်မတော်မှလူ ၆ယောက်ကအဓိကထားဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်သဖြင်. တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကိုတပ်မတော်ကခန်.ခွင်.ရှိသလိုသာဖြစ်နေပါသည် ။ သမ္မတကခန်.ခွင်.ရှိသည်ဆိုခြင်းမှာဟန်ပြသာဖြစ်နေသည် ။ ကာလုံအဖွဲ.တွင် လူ ၁၁ ယောက်သာရှိသည်.အနက် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ပါပြီးပါလျက် ဒုတိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကိုထည်ထားခြင်းမှာလည်း လူထပ်နေသလိုရှိကာ တမင်စစ်ဘက်မှလူများကို လူဦးရေအသာရအောင်လုပ်ထားသလိုဖြစ်နေပါသည် ။ အဆိုးဆုံးအချက်မှာ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အဖြစ်ခန်.အပ်ခံရမည်.သူ၏
(င) အခြားအရည်အချင်းကန်.သတ်ချက် များ
(ဆ) ရာထူးမှဆက်လက်မထမ်းဆောင်သင်.သော စွပ်စွဲပြစ်တင်မှု များ
ဖွဲ.စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင်လုံးဝထည်.သွင်းပြဌာန်းထားခြင်းမရှိချေ ။ ထိုအခါ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကို မည်သည်.စံသတ်မှတ်ချက်များဖြင်.ရွေးမည် (ဥပမာ ဗိုလ်သင်တန်းအပါတ်စဉ်ရှေ.နောက်စီနီယာအရရွေးမည်လား ၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး၊ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဖြစ်မှပဲရွေးမည်လော ၊ သို.မဟုတ် အထက်လူကြီးဟောင်းများ၏အကြံဥာဏ်ထောက်ခံချက်ဖြင်.သာရွေးမည်လား ၊ သမ္မတက ခန်.ထားခွင်.ရှိသည်ဟုပြောထားရာ သမ္မတတကယ်ကြိုက်နှစ်သက်သူကို ရွေးချယ်ခွင်.ရမည်လား )ဟူ၍မေးစရာကိစ္စတွေရှိပေသည် ။ထို.အပြင် သမ္မတသည် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကိုခန်.အပ်ရမည်ဟု ဆိုရာ၌
- သမ္မတတစ်ခါတက်တိုင်း ကာကွယ်ရေးဦးချုပ်တစ်ကြိမ်ခန်.အပ်ရမည်လား
- အငြိမ်းစားတပ်မတော်အရာရှိဟောင်းတစ်ဦးကို ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လောင်းအဖြစ် သမ္မတမှ အမည်တင်သွင်းခွင်.ရှိမရှိ
ကာလုံအဖွဲ.ကလက်ရှိရွေးချယ်ထားသော ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကို နောက်တက်လာသော ကာလုံအဖွဲ.က အသစ်ပြန်ရွေးချယ်ပေးနိုင်ခွင်.ရှိမရှိ စသည်.အချက်များသည် ဖွဲ.စည်းပုံအခြခံဥပဒေတွင်လည်းမပါ ၊ တပ်မတော်ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေငြာမှုလည်းမရှိသော မရှုပ်မရှင်းကိစ္စများဖြစ်သည် ။ထို့ကြောင့်ပြည်သူလူထုက မြန်မာနိုင်ငံဝယ် အစိုးရကသပ်သပ် ၊တပ်မတော်ကသပ်သပ် ဟုထင်မြင်ယူဆကြခြင်းဖြစ်ပါသည် ။
ယခုအခါ တပ်မတော်သည် သမ္မတ၏ခေါင်းဆောင်မှု အောက်တွင်သာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေခြင်း ဖြစ်ပြီး မိမိတို့တပ်မတော်သည် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ၏ ဦးဆောင်မှုအောက်တွင် သာရှိသည်ဟု ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ပြောကြားသောစကားမှာ အံ့သြစရာဖြစ်သော်လည်း ကြိုဆိုရမည့်စကားဖြစ်လေသည် ။ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ပြောသောစကားကိုအတည်ယူရမည်ဆိုပါက ကောင်းလှပါ၏ ။ ထိုအယူအဆ ထိုခံယူချက်မျိုးသည် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်တွင်ရှိသလို နောင်တက်လာမည့် တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်များ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အသစ်များလက်ထက်တွင်လည်း ထိုစိတ်ဓာတ်မျိုးထိုခံယူချက်မျိုးရှိစေရန် စာနှင့်ပေနှင့် ထိုအယူအဆကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် ထည့်သွင်းရေးသာစေချင်ပါသည် ။ မည်သို့ ရေးသားစေချင်သနည်းဟူမူ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အခန်း (၇)တပ်မတော် ဆိုသောခေါင်းစဉ်အောင်တွင် ပုဒ်မ ၃၄၂ (ခ) အဖြစ် တပ်မတော်သည် သမ္မတ၏ခေါင်းဆောင်မှုအောက်တွင်ရှိသည် ဟူသောပြဌာန်းချက်ကိုလည်းကောင်း ၃၄၂ (ဂ)အဖြစ် တပ်မတော်သည် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ၏ ဦးဆောင်မှုအောက်တွင် သာရှိသည် ဆိုခြင်းကိုလည်းကောင်း ၊ ပုဒ်မ ၂၀(ခ)ကို တပ်မတော်သည်တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စအားလုံးကို နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏လမ်းညွှန်ကြီးကြပ်မှုဖြင့် လွတ်လပ်စွာစီမံခန့်ခွဲ စီရင်ဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည် ဟူသည့်ပြင်ဆင်ချက်ကိုလည်းကောင်းတရားဝင်ပြဌာန်းသင့်ပါသည် ။လက်တွေ့ တွင်လည်း တပ်မတော်ကသပ်သပ် နိုင်ငံတော်သမ္မတကသပ်သပ်စီဖြစ်နေသောအဖြစ်များကို ပြည်တွင်းပြည်ပမှ အမြင်ရှင်းစေရန် တပ်မတော်၏ boss မှာ သမ္မတသာဖြစ်ကြောင်း မြင်သာသောသက်သေပြသင့်ပါသည် ။ မည်သို့သက်သေပြသင့်သနည်းဟူမူ တပ်မတော်တွင်သမ္မတ၏အခန်းကဏ္ဍမှာ မရှိသလောက်ဖြစ်နေခြင်းကို ပြင်ဆင်ရပါမည် ။တပ်မတော်နေ့တွင်သမ္မတကိုတပ်မတော်ကြည်းရေလေတပ်ဖွဲ့များကချီတက် အလေးပြုရပါမည် ။ DSA စသောဗိုလ်လောင်းသင်တန်းဆင်းပွဲများတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတအားတပ်မတော်မှ လေးစားစွာဖိတ်ခေါ ပြီး မိန့်ခွန်းပြောခိုင်းရပါမည် ။ တပ်မတော်အတွင်းပြုလုပ်သော အစည်းအဝေး၊ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ ၊ သင်တန်းဆင်းပွဲ ၊ အားကစားပွဲ ၊ပြပွဲပြိုင်ပွဲ စသည့်အခမ်းအနားများတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတကိုတပ်တွင်းသို့ဖိတ်ခေါ်၍ အခမ်းအနားတက်ရောက်စေခြင်း၊စကားပြောစေခြင်း၊ လမ်းညွှန်ချက်ပေးခြင်းတို့ရှိရပါမည် ။ ထိုသို့ အသေးစားကိစ္စများတွင်ပင် နေရာမပေးပါပဲ တပ်မတ်ာသည် သမ္မတ၏ခေါင်းဆောင်မှုအောင်တွင်သာလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းကို ပါးစပ်မှပြောရုံဖြင့် ပြည်တွင်းပြည်ပက ထိထိရောက်ရောက်ယုံကြည်ကြမည်မဟုတ်ပေ ။ Words are warning but action another ဟူသောစကားလို အပြောတခြားအလုပ်တခြားဟုသာထင်မြင်ကြပေလိမ့်မည် ။ တပ်မတော်၏အခမ်းအနားများတွင် သမ္မတကိုဖိတ်ခေါ်၍နေရာပေးခြင်းသည် မပြောပလောက်သေးသော ကနဦး ခြေလှမ်းလှမ်းရခြင်းဖြစ်ပြီး ၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၌ သမ္မတ ကိုနေရာပေးသော အထက်ဖော်ပြပါပြဌာန်းချက်များထည့်သွင်းခြင်းကသာလျှင် တကယ်ခိုင်မာသော ကတိက၀တ်ဖြစ်ပေလိမ့်မည် ။ ထိုသို့မဟုတ်ပါက မိမိပြောသောစကားမှာ လေထဲသို့လွင့်ပျံသွားမည်ဖြစ်ပြီး အကြပ်အတည်းကြုံကာမှ တီထွင်ဖန်တီး၍ပြောသောစကားဖြစ်သွားပေမည် ။
တကယ်တော့နိုင်ငံတကာတွင်မဆိုထားနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပင်လျှင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့အဖွဲ့ရေးဆွဲခဲ့သော ၁၉၄၇ အခြေခံဥပဒေတွင် နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင် ၀န်ကြီးချုပ်သည် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဖြစ်ပါသည် ။ ထို့အတွက်ကြောင့် ဦးနုသည် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတာဝန်ကိုယူခဲ့ဖူးပါသည် (၀န်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးမလုပ်ချင်ပဲ အခြားလူအား ထိုရာထူးကိုခန့်အပ်ပေးလို့လဲရပါသည် ) ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလက်အောက်တွင် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ဗိုလ်ချုပ်စမစ်ဒွန်း၊ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်း ၊ ) စသူတို့ကဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည် ။ ဆိုလိုသည်မှာ နိုင်ငံရေးရာထူးများဖြစ်သော သမ္မတ ၊၀န်ကြီးချုပ် ၊ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး စသူတို့၏အောက်တွင်မှ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရာထူးထားကာ နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည် ။ ထိုသို့လုပ်မှသာ တပ်မတော်သည် အစိုးရ၏ ဦးဆောင်မှုအောင်တွင်သာရှိသည်ဟုပြောခြင်းမှာပို၍မှန်ကန်ပေလိမ့်မည် ။တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးထက်ပို၍ အာဏာရှိနေခြင်း ၊သမ္မတသည်တပ်ပိုင်ဆိုင်ရာကိစ္စများတွင်ဝင်ရောက် စီမံခန့်ခွဲစီရင်ဆောင်ရွက်ခွင့် မရှိခြင်းတို့သည် အစိုးရနှင့်တပ်မတော်သပ်သပ်စီလိုဖြစ်နေစေပါသည် ။ထိုအချက်ကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ရာတွင် တပ်ဖက်မှဂရုစိုက်ပြင်ဆင်သင့်ပါသည် ။ ဒါမှလည်းဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်အောင်လှိုင် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဝင်များကိုပြောသောစကား ဖြစ်သည့် တပ်မတော်အနေဖြင့် သမ္မတ၏ခေါင်းဆောင်မှုအောင်တွင်သာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုသောစကားမှာ ပိုမိုခိုင်မာမှန်ကန်လာနိုင်မည်ဖြစ်သည် ။
မည်သည့်နိုင်ငံဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးအတွက် တပ်မတော်လိုအပ်သည်ဆိုခြင်းမှာ မှန်ကန်ပါသည် ။နိုင်ငံတနိုင်ငံတွင်တပ်မတော်တစ်ခုပဲရှိရမည်ဆိုခြင်းမှာလည်း လက်ခံနိုင်ပါသည် ။ ထို့အတူ နိုင်ငံတနိုင်ငံတွင်ရှိထားပြီးဖြစ်သော တပ်မတော်သည် ထိုနိုင်ငံ၏ အုပ်ချုပ်ရေးအကြီးအကဲဖြစ်သော သမ္မတ (သို့မဟုတ်) ၀န်ကြီးချုပ်၏ ထိမ်းချုပ်မှုအောက်တွင်သာရှိရမည်ဆိုခြင်းမှာလည်းအမှန်တရားတခုပင်ဖြစ်သည် ။ တပ်မတော်တခု၏အကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ် (စစ်သေနာပတိချုပ်) မှာ ထိုနိုင်ငံ၏ ပြည်သူလူထုမဲဆန္ဒဖြင့်တက်လာသော သမ္မတ (သို့မဟုတ်)၀န်ကြီးချုပ်ဖြစ်ရပါမည် ။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည် အရပ်သားလည်းဖြစ်နိုင်ပါသည် ၊ အမျိုးသမီးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါသည် ။ တပ်မတော်အရာရှိဟောင်းလည်းဖြစ်နိုင်ပါသည် ။ သေနတ်မကိုင်ဖူးသော အရပ်သားစစ်စစ်လည်းဖြစ်နိုင်ပါသည် ။ သို့သော် နိုင်ငံတနိုင်ငံ၏ အထွဋ်အထိပ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့် သမ္မတ(သို့မဟုတ်)၀န်ကြီးချုပ်သည်သာလျှင် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ၏ တပ်မတော်အကြီးအကဲဖြစ်ရရိုးထုံးစံသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတိုင်း၏ထုံးစံဖြစ်ပါသည် ။ ပဒေသရာဇ်ခေတ်မှာပင် စစ်သူကြီးဟူသည် ဘုရင်နှင့်အိမ်ရှေ့မင်းသား၏ကွပ်ကဲမှုအောက်တွင် ရှိရစမြဲဖြစ်သည် ။ စစ်ကြေညာခြင်း၊ စစ်ရပ်စဲခြင်းတို့ကို ပဒေသရစ်ခေတ်က ဘုရင်နှင့်အိမ်ရှေ့မင်းကသာ ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိပြီး စစ်သူကြီးသည် အမိန့်အရ သွားရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုသာဆောင်ရွက်ကြရစမြဲဖြစ်ပါသည် ။
၂၁ ရာစုခေတ်တွင်တော့ သမ္မတ ၊၀န်ကြီးချုပ်စသော နိုင်ငံ့အကြီးအကဲများက လွှတ်တော်၏သဘောတူညီချက်ဖြင့် စစ်တိုက်ခြင်း ၊ စစ်တပ်ကိုရုပ်သိမ်းခြင်း ၊ စစ်ပြေငြိမ်းခြင်းတို့ကိုဆုံးဖြတ်အမိန့်ပေးပါသည် ။ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်၏တာဝန်မှာ ထိုအမိန့်ကိုနာခံကာ စစ်တိုက်ခြင်း၊ စစ်ရပ်စဲခြင်း ၊ တပ်ဆုတ်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ရမြဲဖြစ်ပါသည် ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် စစ်ဆင်ရေးတခုမစတင်မီ တပ်မတော်အရာ၇ှိဗိုလ်ချုပ်ကြီးများကလွှတ်တော်တွင်လာရောက်ကာ စစ်ပွဲ အခြေအနေနှင့်တပ်၏အခြေအနေကို လာရောက်ရှင်းပြရပါသည် ။တိုက်မည်မတိုက်မည်ကိုတော့ လွှတ်တော်နှင့်သမ္မတကဆုံးဖြတ်ပါသည် ။ထိုဆုံးဖြတ်ချက်ကို တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်စစ်ဗိုလ်ချုပ်များကလေးစားလိုက်နာရပါသည် ။သမ္မတကတိုက်တော့ဆိုလျှင်တိုက်ပါသည် ၊ ဆုတ်တော့ဆိုလျှင်ချက်ခြင်းဆုတ်ခွာပါသည် ။ ဤသည်မှာ ကောင်းမွန်လှသော ကမ္ဘာ့ အစဉ်အလာဖြစ်ပါသည် ။ ထိုအစဉ်အလာကောင်းကိုလိုက်တော့မည်ဟု အဓိပါယ်ရသော ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်၏ပြောစကားကို တကမ္ဘာလုံးကကြားခဲ့ရပြီုးဖြစ်သည် ။ ဆက်လက်၍အကောင်အထည်ဖော်ဖို့သာလိုပါတော့သည် ။ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း မဖော်ခြင်းဆိုသည်ကတော့ တပ်မတော်၏သမိုင်းကြောင်းနှင့် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ၏ ကံကြမ္မာသာဖြစ်ပါကြောင်း။
News Watch ဂျာနယ်